महिला माथि पुरुषको दमन कहिलेसम्म – Puleso
महिला माथि पुरुषको दमन कहिलेसम्म
पुरुष र महिला बीचको भेदभावलाई लिएर तयार पारिएको उपन्यास अस्मी नेपाली समाजको ऐना हो । सरल भाषा, शैली र हाम्रै मौलिकताको धरतलमा उभिएर कलम चलाएका साहित्यकार हुन मन खत्री ।
हाम्रै समाज र समुदायका पर्दा पछाडी रहेका कथाहरुलाई समेटेर तयार पारिएको यस पुस्तक वास्तविक घटनाहरुको एक मालाको रुपमा उपस्थित भएको छ । जहाँ पुरुषले महिलामाथी गरेको अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषणलाई मूल खामोको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ भने समाजमा उच्च ओहदाका ठानिने भद्रभलादमी मानिसहरु देख्दा राम्रो तर भित्र किराहरु बोकेर फलेको फल विम्बात्मक रुपले लिएको छ । त्यस्तै पत्रकारहरुसंग ढुंगालाई मूर्ति र मूर्तिलाई ढुंगा बनाउन सक्ने सामथ्य रहेको सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ ।
जसरी अस्मी चर्चित लेखिक बनिन् । स्वीकारिएको पहिलो प्रेमले कहिल्यै आत्मा हत्या गर्दैन र पछ्याउन पनि छोड्दैन । जसरी दुःखको बेला निराजनले फोन मार्फत सान्त्वना दिँदै अस्मीलाई फोन ग¥यो र देश नै छोडेर जाँदा पनि एक शब्द फुरेन दोश्रो प्रेमी डा. विनयले । फुलका आकार र प्रकार अनुसारको आ–आफ्नै वास्ना हुन्छ जस्ता कुराहरुलाई उठान गर्दै साहित्यकारले आफ्ना भावनालाई प्रस्तुत गरेका छन् ।
इतिहास जित्नेहरुको लेखिन्छ या ठूला बडा भनाउँदाहरुको लेखिन्छ । उपन्यासको सुरुवात नै वैदिककाल देखि नै महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण सधैं कु रहेको पाइन्छ । सबै धर्मका धर्मग्रन्थहरुमा किन पुरुष नै शक्तिशालाी छन् ? किन महिलाहरु आश्रित छन् ? महिलाहरुको योगदानको किन कदर हुँदैन ? जस्ता पक्षहरु माथि प्रश्न चिन्ह उठाउँदै अहिलेको समयमा पनि त्यसै गरि चलिरहेको देखाइएको छ । यहाँ अन्याय र अत्याचारका विरुद्धमा मानिसहरु किन अगाडी पर्न सक्दैनन् भन्ने प्रश्नमा कारण सहित लेखकले जवाफ दिएका छन् ।
गन्ध आउने सिरकमा सेतो खोल हाले पछि आफूलाई सुन्दर सम्झन्छ अनि देख्ने-सुन्नेहरुले पनि सेतो खोल हालेपछि वास्नादार सिरक नै भन्ठान्छन् । ठूलो सूर्यलाई त सानो बादलको झुण्डले छेक्न सक्छ भन्ने कुरालाई बिर्सेर अन्यायको विरुद्धमा महिलाहरु अघि पर्न डराउने भएको कारण उनीहरु झन–झन दलदलमा फसेका छन् भन्ने कुरालाई बडो जोडदार रुपमा उठाइएको छ ।
जस्तै : उन्यासमा अस्मीकी हजुरआमाले आफ्नो देवरले गरेको व्यावहारको विरुद्धमा औंला उठाएर गाऊँका सारा महिला दिदिबहिनीहरुको साथ लिई कदम चालेको भए न त उनले पिडा सहि रहनु पथ्र्यो न त उनीकी बच्ची छोरीले नै सहनु पथ्र्यो । उनले (अस्मीकी हजुरआमाले) आफ्नो इज्जतको लागि आफ्नो पिडा लुकाएकोले ती माइलोबाबु भनाउँदो यौन पिपासुले १३ वर्षकी भतिजिलाई समेत बाँकी राखेनन् । भारतीय सैनिको मेजर भएका ती माइलाबाबुको (अस्मीको माईलो हजुरबाउ) गाऊँमा ठूलै इज्जत थियो । त्यसैले गाऊँका सबैले उनलाई नै सम्मान गर्थे । सारो गाह्रोमा उनलाई नै डाक्थे ।
गलत नै भए पनि उनकै कुरा सुनिथ्यो । त्यही कारण अस्मीकी आमा र हजुरआमाले आफ्ना पिडाहरु बहिर ल्याउनै सकेनन् किनकी दोष उसले(हजुरबाउले) गरे पनि दोषी तीनै हजुरआमा र ती बालिका हुन्थिन । यस्तै तितो यर्थाथ पस्किएका छन् लेखक मन खत्रीले उनको साहित्यिक कृतिमा ।
यस उपन्यासमा कतिपय घटनाहरुमा महिलालाई महिलाले नै दबाउने प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ । जसरी अस्मीको विनयसंग बिहे गर्ने प्रसंग चल्दै गर्दा विनयकी आमाले मेरो बुहारी हुनको लागि घरव्यावहार गर्ने, पाउनाहरुको राम्रो स्वागत सत्कार गर्ने, हामी(सासु ससुरा)को सेवा/स्याहार सुसार गर्ने बुहारीको खोजिमा रहेको कुरा स्पस्ट हुन आउँछ । साथै बाहिर जागिर गरी पैसा कमाउने केटीको कमी नभएको र त्यस्ता केटीहरुको बिहे गर्नको लागि लाम लस्कर भएको दम्भ उनको बोलीमा पाइन्छ ।
यसले के स्पस्ट पार्छ भने महिलाहरुलाई महिलाहरुले नै दबाएर आफ्नो फाइदाको लागी प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति रहेको कुरालाई लेखकले केन्द्रमा राखेका छन् ।
अर्को पाटो, प्रेमको बारेमा पनि उनी प्रेमी र प्रेमिकाको मन भित्रै पसेर कलम चलाएका छन् । उनको पहिलो शब्द नै यस्तो छ “प्रेम लाउँछु भन्दैमा लाउन सकिने र फाल्छु भन्दैमा फाल्न सकिने बजारमा किन्न पाइने गुलाबको फूल होइन ।” जब मन, विचार र भावनाको मिलन हुन्छ जब प्रेमको मुना पलाउँदै फैलँदै जाँदो रहेछ । फैलने क्रममा आफ्नो अगाडी आएका साना ठूला तगाराहरु तोड्न तयार हुन्छन् ।
बाहाना बनाइ–बनाई भेट्नु प्रेमको प्रमुख विशेषता हो । जसरी अस्मीले निराजनलाई भेट्नको लागि नालाबाट बनेपासम्म ट्यूसन पढ्न, फिल्म हेर्ने र सपिङ गर्न जान्थिन अनि चिया पिउने बाहानामा निराजन(प्रेमी) को कोठा सम्म पुग्थिन र प्रेमिल जोडी रमाउँथ्यो । बाहिर खाजा महँगो हुने निहुमा दुध र पाउरोटी-बिस्कुट बोकेर कोठा मै खाजा खान्थे प्रेमिल जोडी । त्यति बेला देखि नै दुवैले एक अर्कालाई मनको सन्दुकमा सजाई सकेका थिए ।
संकटकालको बेला छुटेको उनीहरुको पे्रम पानी बिनाको माछा जस्तै छटपटाई रह्यो । मन बहलाउने बाहानामा जीवनको विच–विचमा केही सम्बन्धहरु जोडिए पनि स्थिर रह्यो त उही पहिलो मायाँ सन्दुक भित्रको । जसलाई सम्झँदा स्वास फुलेर आउँछ, मुटु छिया–छिया भएर चर्किन्छ, आँखा बन्द गर्दा उसको छायाँले बाटो छेक्छ खोल्दा आँसुले छेक्छ । यस्तै यस्तै प्रसंगहरुलाई लिएर यस उपन्यासलाई अझ गर्विलो-दर्विलो बनाएका छन् साहित्यकारले ।
अन्त्यमा, यो जगतमा सबै मानिसहरु एकै नासका हुँदैनन् कोही तीनै अस्मीका माईला हजुरबाबा जस्तै कुलंगार, कलंक हुन्छन् त कोही प्रताप (अस्मीको बुवा) जस्ता भगवान । जो आफ्नो बचनका पक्का महिलालाई सधैं सम्मान गर्ने, आफ्नो भन्दा पनि अरुको खुसीको निम्ति हिड्ने । यो पुस्तकमा उल्लेख भएकी महिला आफ्नो अस्तित्व र अस्मीताको लागि अस्मीकी ठूलो हजुरआमा जस्तै जुझारु हुन जरुरी छ । आजको युगमा प्रत्येक अभिभावकले यो कुरा बुझ्नु पर्ने भएकै कारण अस्मी उपन्यासको जन्म भएको भाव स्पस्ट पाउन सकिन्छ ।